Ukuvakashela eSri Lanka: ingabe izivakashi zaseSpain zidinga i-Visa? | Ukuhamba Okuphelele
U-Emilio Garcia | | India
I-Sri Lanka ingelinye lamazwe asesebenze kakhulu eminyakeni yamuva nje njengendawo yokuvakasha. Izwe, elaziwa ngokuthi "i-tear of India" ngenxa yesimo salo sendawo, liyakwazi ukwenza noma yisiphi isivakashi esichitha izinsuku ezimbalwa endaweni yalo sithandane nalo. Yabo indawo enezintaba egcwele amasimu etiye noma amadolobha ayo ahlaba umxhwele angamakoloni ezinye zezinto ezikhangayo eziyinhloko.
Kodwa futhi izwe linezinhlobonhlobo zezilwane ezihlala endle eziqiwini zalo, njengezindlovu nezingwe. Izithombe zayo eziqoshiwe zikaBuddha eziqoshwe emadwaleni kanye namabhishi asendle aseningizimu alungele ukuntweza emanzini ngezinye zezinto eziyenga isibalo esandayo sezivakashi minyaka yonke.
1 Kodwa ingabe izivakashi zaseSpain zidinga i-Visa ukuze zingene eSri Lanka?
2 Inqubo edingekayo yokungena ezweni
Kodwa ingabe izivakashi zaseSpain zidinga i-Visa ukuze zingene eSri Lanka?
Ukuvakashela iSri Lanka, kungakhathaliseki ukuthi okokuvakasha, ibhizinisi noma okokuthutha ukuya kwelinye izwe, kuyadingeka ukuthola a i-visa yase-Sri lanka lokho kukuvumela ukuthi ungene futhi uchithe isikhathi ezweni ngokusemthethweni. Izakhamuzi zaseSpain udinga ukufaka isicelo se-Visa ngaphambi kokuvakashela eSri Lanka, ngaphezu kokukwazi ukukhombisa ezinye izidingo izwe elizidinga kubahambi bamazwe ngamazwe.
I-visa yokungena eSri Lanka, eyaziwa nangokuthi i-ETA, iyadingeka kubo bonke abahambi. Kuyisigunyazo esivumelekile sokungena kanye ezweni futhi ungakuthola ngemva kokubhukha izindiza, kodwa njalo ngaphambi kokungena ezweni. Kufanele futhi ubonise isiphathimandla sezokufika ukuthi unobufakazi bokusekela ngokwezimali ngokuhlala kwakho ezweni, futhi ubonise ipasipoti esebenza okungenani izinyanga eziyi-6 kusukela ngesikhathi ungena ezweni.
Ezinye izidingo ezidingekayo kulabo abangena eSri Lanka, kungaba ngezokuvakasha noma ngezizathu zebhizinisi, ukubhuka kwendiza ebuyela kwelinye izwe noma ukhokhele i-visa yebhizinisi ekhethekile uma ungena ezweni ngebhizinisi, ukuqashwa noma ukuthenga nokudayiswa kwemikhiqizo kanye/noma amasevisi.
Inqubo edingekayo yokungena ezweni
Abantu baseSpain abahlela ukuvakashela eSri Lanka kumele bathole i-ETA yabo eSri Lanka ngaphambi kokungena kuleli. Ungayithola ngokuyofaka isicelo mathupha ehhovisi lenxusa laseSri Lanka eSpain, kodwa kungcono kakhulu ukukwenza ku-inthanethi. Futhi ukuthi izwe lase-Asia manje selivumela inqubo ukuthi yenziwe nge-inthanethi ukuze kube lula ukufinyelela kwezokuvakasha ezweni.
Kuyadingeka ukulandela izinyathelo zokugcwalisa ifomu, ongase udinge iseluleko sochwepheshe. Mayelana nezindleko zokuthola i-ETA yaseSri Lanka, Kulinganiselwa kuma-euro angama-45 ngokusho kwedatha yakamuva enikezwe yiSri Lanka, nakuba kungase kuhluke ngesikhathi ohlela ngaso uhambo lwakho. Izindleko ze-Sri Lanka ETA ngezizathu zebhizinisi zingase zibe nezindleko ezengeziwe uma ziqhathaniswa ne-ETA ngezizathu zokuvakasha.
Into evamile kulolu hlobo lwenqubo ukuthola impendulo esemthethweni ngesiteshi esithile sokuxhumana, njenge-imeyili. Le imeyili ngokuvamile itholwa ngaphansi kwezinsuku eziyi-7, ngakho-ke kubalulekile ukukwenza kusenesikhathi ngaphambi kosuku lokungena ezweni ukuze uqiniseke ukuthi unayo lapho kufika isikhathi. Ngenhlanhla Kukhona ama-ejensi nezinkampani ezinikezela ukwenza lolu hlobo lwenqubo. abahambi ngakho akudingeki bakhathazeke ngokuthile.
Uma uhlela ukungena eSri Lanka esikhathini esingaphansi kwezinsuku eziyi-7 futhi udinga ukugunyazwa kwe-ETA ngokushesha, ingacutshungulwa kodwa kufanele khombisa esicelweni ukuthi kuyinqubo ephuthumayo futhi lokhu kungaba nezindleko ezengeziwe, njengoba kufanele bacubungule isicelo se-ETA ngesikhathi esincane kakhulu kunokuvamile.
Njengoba ubona, kuyadingeka ukuthi abaseSpain bafake isicelo se-Visa yokungena eSri Lanka nganoma yisiphi isizathu sokuhamba, kungaba ezokuvakasha noma ezebhizinisi. Inqubo edingekayo eyenza kube lula ukuhamba kwezivakashi lapho zifika esikhumulweni sezindiza futhi ivumele izwe ukuthi libe nokulawula okukhulu phezu kwalabo abangena endaweni yalo futhi beqe imingcele yalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Ukuvakashela eSri Lanka: ingabe izivakashi zaseSpain zidinga i-Visa?
Izinto ezibalulekile ongazenza futhi uzibone ohambweni lwakho lokuya e-Punta Cana